Kwiintsomi zomoya ungafumana iqabane lakho lomphefumlo kwiMMO | I-Androidsis
Iintsomi zomoya yenye yezo MMOs ze-Android apho anokusishiya "sithandana" ngenxa yomgangatho obonakalayo omkhulu. Ayisiyiyo le nto kuphela, kodwa ngenxa yokuba sijamelene nelizwe elivulekileyo apho singavula khona imisebenzi eyahlukeneyo kwii-NPC, ukuze kwiimitha sikwazi ukulwa ukugqiba ubizo ngokususa ezo bugs.
Umdlalo wasimahla kunye nohlobo olukhululekileyo olunokuthi imisebenzi igqitywe ngabo, ukuba siyayifuna ngale ndlela, kunye nothotho lwemishini kumagumbi athi, nangona engabanzi kakhulu, anako ukonwaba kwaye anikeze into eyintsusa ; ngokulula jonga igorha lethu likhwele kumthi usiya emlanjeni Ingaphezulu ngokwaneleyo.
1 I-MMO enehlabathi elivulekileyo
2 Kwaye ujonge ukuthandana kwiiNdaba zoMoya
3 Ungaphuthelwa yi-PvP okanye i-PvP ngexesha lokwenyani
I-MMO enehlabathi elivulekileyo
Iintsomi zomoya ziye zeza kwi-Android njengenye yee-MMOs ezizama ukudibanisa amashumi amawaka abadlali. Ngokuqinisekileyo iya kuyifumana, kuba inayo yonke into edla ngokujongwa kolu luhlu lwemidlalo. Ubuhle obubonakalayo, abalinganiswa abayilwe ngokugqwesileyo kunye nehlabathi elivulekileyo apho siya kufumana zonke iintlobo zeentshaba nabagxeki bazo ezipholileyo.
Ukuba songeza koku ukuba iqhawe lethu linokuguqula libe yenye yezo izilwanyana ezinkulu zezilwanyana, chwetheza ummelwane wam uTotoro ukusuka kwi-Studio Ghibli, uninzi luya konwaba yile MMO. Injongo yethu iya kuba kukunceda ukufumana inyaniso efihliweyo kunye nokufumana kwakhona ukukhanya, kuba iLa Place, isixeko esisikelelwe ngoothixo, okwangoku siphantsi komthunzi weedemon.
Ngale nto siya kuba nethuba lokukhetha phakathi kweeklasi ezine eziphambili, ezinje ngokuba ngumthakathi okanye umkhosi, kwaye ukonwabela iMMO eneendlela ezahlukeneyo zomdlalo. Sithetha ngendlela esinokudlala ngayo imidyarho, ukudubula, imibuzo kunye nomdlalo weendlela ezahlukeneyo zomdlalo. Nanamhlanje babhengeza imo yefama (mhlawumbi into yokusonwabisa? Uhlobo lweStardew Valley?).
Kwaye ujonge ukuthandana kwiiNdaba zoMoya
Kwiintsomi zomoya siza kuba nethuba lokudibana nothando lobomi bethu kolu lonwabo. Ngaba indlela yokufumana iqabane lakho lomphefumlo Into esicinga ukuba iyakudibana nomdlali eninokugqibezela ukuhlangana naye, thembisa uthando lwakho ecaweni phambi kwabahlobo bakho kwaye nilawule ifama njengesibini ukuze yonke into igqibelele.
Enye inkcukacha yeMMO yile ixesha langempela lokulwa aya kuyidinga kuwe ukuze kungadinisi konke. Ukuba inenxalenye yokudlala ngokuzenzekelayo, kodwa enye enye kukuba thina sihamba ngomyalelo kunye nenani elifanelekileyo lezakhono ekufuneka sizicinezele. Inyani yile yokuba iitales zomoya zinika imvakalelo yokuba kwilizwe eliphilayo nelinamandla kwaye livulekile phakathi kwabo bonke abadlali esiza kubona sidlula kunye nezo NPCs kunye nehlokondiba lokubulala.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, unokuba yinxalenye yombutho olwa nawo nabanye kwaye ke ube yinxalenye yemowudi yeGcG (umbutho ngokuchasene nombutho). Kwaye ukuba sithethile ngemitshato kunye nemicimbi yothando, Akusayi kubakho kunqongophala kwamaqela, izidlo kunye nemisitho yemibuzo yokwenza ubomi bonke bokwaneliseka ukuba ngamalungu osapho.
Ungaphuthelwa yi-PvP okanye i-PvP ngexesha lokwenyani
Kwaye ukuba ubomi bosapho buyakudina, nawe unayo Inxalenye yokulwa abanye abadlali ngexesha lokwenyani. Uyakwazi ukuphakama kwiinqanaba kwaye ubonise into eyenziwe ngayo. Ke yonke into ekwiiTails zoMoya yinxalenye yamava emidlalo amahle kwifowuni yakho ye-Android. Kuhlala inxenye ye-freemium ethi, njengesiqhelo, inike amaphiko kwabo basebenzisa ii-micropayments. Ukuphumla, ukutshintsha ixesha lakho lobomi kuya kusetyenziselwa ukuqhubela phambili kwi-MMO ethembisa kakhulu. Oh kwaye oku ngeSpanish.
Ngokobuchwephesha Iintsomi zomoya kukubheja okukhulu kwimbonakalo, oopopayi kunye noyilo lwabalinganiswa. Kananjalo akufuneki siyityeshele imeko-bume, iziphumo zomlingo kunye nezo menyu zicacileyo zisivumela ukuba siqhubeke nokuqhubela phambili. Mhlawumbi yonke into eyenzeka kwiscreen xa sikwihlabathi elivulekileyo liyinto emdaka ngakumbi. Inamandla amakhulu kangangokuba siya kudinga iiyure ukuyifumana.
Iintsomi zomoya yiMMO elungileyo ejolise kukunika amava amahle yokungcakaza online. Zonke ezi ndlela zahlukeneyo kunye nendlela ebonakalayo ebonakalayo esenza ukuba sifune ukuba yinxalenye yoluntu oluku-intanethi lwabadlali. Ukuba sele ufumene iqabane lakho lomphefumlo lidlala, lingcono kunokuba libhetele, ulinde ntoni?
Iindlela ezahlukeneyo zemidlalo
Ihlabathi elivulekileyo kunye nokulwa kupholile
Umthuthukisi: I-NEOCRAFT LIMITED
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iintsomi zomoya, okanye xa iMMO inokusishiya sifunxwe bubuhle bayo kwimizobo